Ngwọta: Usoro iwepụ nke olulu mmiri buru oke ibu - Ikkaro
Inicio >> Ndozi >> Otu esi emeghari uzo eji ekpochapu mmiri iji mee ihe na nke pere mpe
Abịa m mmezi. Ihe na-adịghị zubere ịba uru, ma ọ fọrọ nke nta. Enwere m usoro mkpofu nke tankị mmiri ahụ mebiri emebi. Ndị a bụ mmezi dị mfe nke na-achọghị nkọwa dị ukwuu, ị gbasasịa nke ochie, zụta nke ọhụrụ ma tinye ya.
Ma nke ahụ bụ o nweghi uzo ozo diri olulu m. Ha bụ ugbu a zuru ụwa ọnụ ma nwee nnukwu dayameta karịa ka m chọrọ. N'ihi na ihe anyị nwere n'ụlọ bụ ihe ochie na ụdị Vintage.
Nsogbu banyere ụlọ mposi
Nsogbu, dị ka m kwuru n'elu, bụ na dayameta nke ọkpọkọ nke usoro eluigwe na ala sara mbara karịa dayameta nke oghere nke olulu ahụ ọ gafere.
Ọ bụ okwu nke millimita mana ọ naghị eme na mgbe m gara Leroy Merlin na ọtụtụ ụlọ ọrụ pọmpụ na-agwa m na ha enweghị ihe ọ bụla pere mpe, na m ga-agbanwe olulu mmiri ma ọ bụ ụlọ mposi niile.
Ebe nwunye m bu ulo mposi puru iche, nwunye m kwuru na oburu na anyi gbanwee ulo mposi a, o gha abiala ihe mpako.
N'okwu m, dị mfe, ọ bụ ezie na ahụbeghị m iberibe m na-achọ ma ejikwa m ihe m chọtara na Leroy Merlin. Ọ bụ ihe mee mbelata na ọkpọkọ PVC.
Amaara m na ọ bụ ihe dị mfe dị ka m na-ekwu nakwa na ọ dị ka ọ doro anya mana ejiri m n'aka na ọtụtụ mmadụ, chere nsogbu a ihu, gbanwee ụlọ mposi niile.
Enweela m tube m tụlere ya n'ime ntọala nke usoro ahụ. Ejiri m PVC welder ya na akụkụ ahụ (isi awọ) nke na-apụta na nke ga-agabiga, ejiri m Dremmel wedata ya.
Ọ bụrụ na ị mee ya dịka m, mara na akụkụ ọcha niile dị n'ime olulu mmiri na mmiri nke na-adịghị asọpụ. Tankgbọ m dị elu ma enweghị m nsogbu, mana lee ya anya ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji mmiri mmiri, belata akụkụ a ka ọ gbanwee ya ka o kwere mee ebe mmiri na-agbapụta. [/ Highlighted]
Akara m ya ka ị nwee ike ịhụ ya nke ọma. Nwere ike belata ihe akara na-acha uhie uhie na n'ụzọ dị otú a ọ ga-ewepụ ya na tank n'ime.
Achọrọ m ka akụkụ nke na-apụta na-threaded na-enwe ike uko ya nke ọma na ofu, ma ebe ọ bụ na m na-ahụghị ihe m na-achọ na enweghị m 3D ebi, ọ nọgidere dị ka ị pụrụ ịhụ na ihe oyiyi . Ejirila m threadi ejiri ya mee ka o sie ya ike.
Na njedebe Emere m ihe mkpuchi ahụ site na iji silicone na m nwere ikwu na ọ dị ezigbo mma ma na-arụ ọrụ zuru oke.
[pụta ìhè] BRICO NDIPMỌD:: Ejila silicone emebiela ihe karịrị otu afọ gara aga. Ọ naghị akpọnwụ nke ọma na nnyapade mmado na-anọgide na m ga-ewepụ ma dị ọcha. Ihe niile n'ihi na iwerekwa: S [/ pụta ìhè]
Na ngwụcha ihe niile, anyị ga-eburu n’uche na anyị nwere ike iji sistemu iyi mmiri nke ụwa niile jupụta ma ọ bụrụgodi na ha anaghị agabiga n’olulu ahụ.
Na nke a bụ akụkọ dum. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere echiche ọzọ ma ọ bụ na enwere usoro maka okwu ndị a, hapụ okwu. Ọ na-efu m ntakịrị ihe karịa € 1 iji dozie ya.
Enwere m afọ ojuju nke ịghara ịgbanwe ụlọ mposi mgbe ọ dị mma.
Olee otú Iji Mee Cheap naịlọn Eriri Refills N'ihi ...
Na-agbake ihe ochie Linux kọmputa
Chọgharịa na proxy
Ngwọta: avrdude: ser_open (): enweghị ike imeghe ngwaọrụ na Arduino
Categories Ndozi Igodo bọtịnụ
Planegbọ elu na-adịkarị (Delichon urbicum)